08/19/13 ~ Myanmar News Updates
ပညာရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ
11:19:00 PM Myanmar News Updates No comments
လူတိုင်း နေရာတိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီ ဟူ၍အသံများ အားကျယ်လောင်စွာ ကြားရစမြဲ ဖြစ်ပါသည်။ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာအများ ပြည်သူ သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ် အုပ်ချုပ်စေခြင်းလို့ အဓိပ္ပယ် အလွယ် မှတ်ယူရပါမည်။ယခုမျက်မှောက် ခေတ်တွင် နိုင်ငံအများအပြား သည်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများအဖြစ်သို့အလျှင်အမြန်ကူးပြောင်းလာလျှက်ရှိပါသည်။ဤအကြောင်းအချင်းအရာ ကို ကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ လူသားတို့ လိုချင်မက်မောစရာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး နည်းစနစ် တစ်ခု ဖြစ်သည်မှာ မငြင်းသာပေ။ထို့အတူ ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူတို့ဆန္ဒ
ကို အနည်းအများ ခွဲခြား၍ စနစ်ရှိလှသော နည်းစနစ် ဟု ဆိုခဲ့ကာ ကျွန်တော် တို့သည်ပြည်သူလူထု ဆိုသည့်အကြောင်းအခြင်းအရာ ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား စရာ တစ်ချက်ဖြစ်လာပါသည်။
အတူ၎င်း တို့၏ အသိပညာ အတတ်ပညာ ဆိုင်ရာစသည့်ကိစ္စရပ်များ ကို လည်း အသိတရား ဖြင့် သတိထားစဉ်းစားဖို့လိုလာပါသည်။ကြားဖြတ်၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင်အချို့သောသူများသည် ဒီမိုကရေစီ ဆိုသည်မှာ လိုတရ နတ်ရေကန်တစ်ခု အလားမျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်ကြည့်ကာ ပုံဖော်နေကြသလားဟုပင် ထင်မှတ်ရလေသည် ။ကျွန်တော် သိသော ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ"အခွင့်အရေးဟင်းအိုးကြီး "မဟုတ်ပေ ။ အများပြည်သူ ဆန္ဒဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြောက်သည့် အစိုးရနှင့် တာဝန်သိ တတ်သောပြည်သူတို့ စည်းဝါးကျကျ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည့် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ဟု ဖွဲ့ဆိုသော် မှားအံ့မထင်ပေ။ထို့ကြောင့် အစိုးရနှင့် ပြည်သူတို့သည် ဟန်ချက်ညီကြဖို့လိုသည်။ထို့ကြောင့် မဲဆန္ဒပေးခွင့်ရသော ပြည်သူသည် များစွာအခရာကြလာပေသည်။ပြည်သူတို့သည်အကြောင်းအကျိုး၊အကောင်းအဆိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော အရည်အချင်းရှိရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။
သို့မှသာ လည်ပတ်နေတဲ့ပင်နယံ အသွားကဲ့သို့ ပြည်သူ နှင့် အစိုးရ ဟန်ချက်ညီကြပေလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါလျှင် အစိုးရသည်မည်မျှပင်ကောင်းအောင် လုပ်နေစေကာမူ ဟန်ချက်မညီမျှ၍ ဗရုတ်သုတ်ခ ဒီမိုကရေစီ သာ ရကြမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီ ထူထောင်သော နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ရာခိုင်နှုန်း အများစု မှာ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင် ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း ရှိဖို့လိုသည်မှာ ပကတိ အရှိတရား ဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ပါတယ် ပြောပြော ၊ ဘယ်လောက်ပဲ
ဒီမိုကရေစီ ရနေပါတယ် ပြောပြော ပညာမဲ့ လက်ထဲက ဓာတ်လုံးဟာ သူ့ကို ဆိုးကျိုးပေးမယ့် အဆိပ်လုံး တစ်လုံးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတစ်ခုမှာပညာရေးကိုအုတ်မြစ်မချပဲ ခေတ်မီတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို့...
ဆိုသည့် ကြွေကြော်သံတွေဟာအဆန်မပါအသံသာမြည်တဲ့သင်္ကြန်အမြောက်ကိန်းနည်းတူပဲ ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ခေတ်လူငယ်တွေသည်ပညာကိုအပတ်တကုတ်ရှာဖွေကြရန်၊လက်ဆင့်ကမ်းကြရန် မေတ္တာရပ်ခံ
လိုပါသည်။ ဒါဖြင့် ဆက်စပ်၍ ဟိုတနေ့ က ၈၈ ရဲ့ ၂၅ နှစ်မြောက် အခမ်း အနား နေ့တွင် ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများကို ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် တန်းစီးလှည့်လည်နေတဲ့ ပုံများနှင့်တွေ့ ရတော့ အတော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။ ဘာကြောင့် နိုင်ငံရေးသမားလို့ ခေါ်တဲ့ လူတစု ဟာ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးတွေကို အသုံးချနေပါသလဲ ။၀ါဒမှိုင်းတိုက်နေပါသလဲ ကျွန်တော် ဖြင့် စဉ်းစား၍ မရပါ။နိုင်ငံရေးသမားများ နိုင်ငံရေး လုပ်သည်ကိုမဝေဖန်လိုပါ.၊ သို့သော် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများကို ဖြင့် စာကလေးသိုက်နဲ့ သပွတ်အူ ဇာတ်ထဲ ဆွဲမထည့်စေချင်သည်မှာအမှန်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေသနည်း ။ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်ပါသည်.။ ဟိုနိုင်ငံမှာ ဟိုအခွင့်အရေး ရတယ် ၊ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီအခွင့်အရေး ရတယ် ဖြင့် လက်ညှိုးထိုး၍ ညွှန်းဆိုကြပါသည်။ အမှန်စစ်စစ် ထိုနိုင်ငံများ၏ ဒီမိုကရေစီ သက်တမ်းကို သူတို့ မသိကြခြင်းလား ၊ မသိခြင်ယောင် ဆောင်နေခြင်းလား ကျွန်တော်မသိနိုင်ပေ ။ သူကိုယ်သူ ဒီမိုကရေစီ ဘိုးအေကြီးလို့ ခံယူနေသည့် အမေရိကန် သည်ပင်ဤအခြေအနေမျိုးရောက်ရန် ဆယ်စု နှစ် ၂၀ နီးပါးမျှ ဖြတ်သန်းခဲ့ရ သည်ဟု ဖတ်မှတ်ဖူးပါသည်။ဒါတောင် အမေရိကန် မှာ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အ၀ ရနေပြီ ၊ လူ့အခွင့်ရေးတွေ အပြည့်အ၀ ရနေပြီလို့ မထင်ပါနှင့် ။ နေ့စဉ်ခိုးဆိုးလုယက်မှုတွေ ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟ မှုတွေ မြောက်များစွာ ရှိနေတုန်းဆိုတာ မမေ့စေလိုပါ။
အချုပ်ဆိုရသော်ဒီမိုကရေစီအရင်းအမြစ်အစစ်အမှန်မှာပညာရေးသာ ဖြစ်ပါသည်။တနည်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တွင် ပညာတတ်သော ၊ ဆင်ခြင် ဝေဖန် နိုင်စွမ်းရှိသော ပြည်သူလူထု အားကောင်းရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်။သို့မဟုတ်လျှင် ဆင်ခြင်တုံတရား မဲ့သော နိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီ သည် ဗရုတ်သုတ်ခ ကို သာ ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
11:13:00 PM Myanmar News Updates No comments
ကျွန်တော်တို့ ဟာ ပြည်သူ တွေ ကနေ မွေးဖွား လာသော ၊ ပြည်သူထဲက ပြည်သူများ ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်သူတွေ ရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်နိုင်သလို ၊ လယ်ယာမြေ ပြဿနာများနှင့် ပက်သက်လို့ ကိုယ်တွေ့ တွေလည်း ကြုံတွေ့ ခံစားရဖူးပါတယ် ။ ဒီမြေ ဒီယာတွေ ဟာ ၊ ဘိုးဘွားလက်ထက် ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ် ၊ ဘိုးဘွား တွေ သေဆုံးတဲ့ခါ အဖေ အမေတွေကို အမွေပေးခဲ့တယ် ။ဒီလယ်မြေ ယာမြေတွေကိုတစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ကောင်းမွန်အောင် မြေပြုပြင်တာတွေ ၊ ရေ ကြာကြာနေအောင်ကသန်း တင်ရတာတွေ မျိုးတွေမှာ မိသားစုလိုက် ၆ နှစ်သား ၊ ၇ နှစ်သား ကလေးတွေ ပါမကျန် တစ်မိသားစုလုံး လုပ်ကိုင်ကြရတာမျိုးပါ ။ စီးပွားရေး အဆင်မပြေလို့ မိဘလက်ငုပ်လက်ရင်းလေးတွေကို ရောင်းချသုံးစွဲရတာ မျိုးရှိသလို ၊ ပေါင်နှံ သုံးစွဲရတာမျိုးလည်းရှိတယ် ။ ရောင်းမယ် ပေါင်မယ် ပဲ ထားပါတော့ ... မောင်ဖြူ ဆီမှာရောင်းရင် ၁ သိန်းပဲရမယ် ၊ မောင်မဲ ဆီမှာရောင်းရင်တော့ ၅ သိန်းလောက်ရမယ် ဆိုရင် ... ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မောင်မဲ ဆီရောင်းချင်တာ သဘာဝကျမယ်ထင်ပါတယ် ။ တခါတခါ စီးပွားရေး အဆင်ပြေတဲ့ချိန် တခြားတပါးသူဆီကနေ ဝယ်ယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိုက်ပျိုးမြေတိုးချဲ့ ရတာတွေလည်းရှိတယ် ။ ရွာနားတစ်ဝိုက် ၊ မြို့နားတစ်ဝိုက် ပိုင်ဆိုင်သူတွေသာ ပြောင်းသွားကြတယ် ။ ဒီမြေကတော့ ဒီမြေပဲ ။ အဲဒီ လယ်ယာမြေ နဲ့ ပဲ စားသောက်ဖို့ ၊ သားသမီးတွေ ကျောင်းထားဖို့ ၊ ကျန်းမာရေးစားရိတ်သုံးစွဲ ဖို့ ၊ အလှုအတန်းပြု ကြဖို့ ၊ ကုသိုလ်ရေးလုပ်ကြဖို့ ရှာဖွေ ကြရတယ် ။ ဒီလယ်မြေတွေ ၊ ယာမြေတွေ မှ မရှိရင် ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ ။ လမ်းတွေဖောက်တယ် ၊ စက်ရုံတွေ ဆောက်တယ် ၊ အစိုးရစီမံကိန်းတွေ အကောင်ထည်ဖော်တယ် ၊ တပ်တွေတည်တယ် ... ကိုယ် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ လယ်မြေ ၊ ယာမြေတွေမှာ စီမံကိန်းမြေ ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်လေး လာထောင်လိုက်တာနဲ့ လုပ်ကိုင်လို့ မရတော့ဘူး ။ တခါတလေ သီးနှံ လေး တွေ စိုက်ထားတယ် .. ကိုယ်က ဂရုစိုက်ဖို့ မလိုသေးလို့ တခြား လယ်မြေ ၊ ယာမြေတွေမှာ သွားလုပ်ကိုင်နေတယ် ... ကိုယ်သီးနှံလေးတွေ ကိုယ်လည်းသွားကြည့်ရော အလယ်တည်တည် ကနေ ဘူဒိုဇာ နဲ့ ထိုးသွားတယ် ။ တားချိန် ဆီးချိန်လည်းမရလိုက်ဘူး ။ ယူတာကတော့လမ်းတစ်နေရာစာ ပဲ ဒါပေမဲ့ ... လမ်းဟိုဘက်လည်း ထွန်တတုံးးစာ ၊ လမ်းဒီဘက်လည်း ထွန်တတုံးစာ ပဲ ကျန်တော့ တဲ့ခါ ဆက်လုပ်လို့ မရတော့ တာ မျိုး ကိုယ်တွေ့ ကြုံရဖူးတယ် ။
ပြည်သူအတော်များများမြင်ကြတာ က သူတို့ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော မြေ ၊ ယာတွေ ကို တပ်မတော် က ဝင်ရောက်နေထိုင် နေတာ ၊ ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ... တပ်မတော်က မြေသိမ်းတယ် (သို့) တပ်သိမ်းမြေလို့ မြင်ကြတာပါ ။ သို့ ပေမဲ့ တပ်မတော် က မြေသိမ်းခွင့် မရှိသလို ၊ မြေသိမ်းလို့လည်းမရပါဘူး ။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ကသာ နိုင်ငံအကျိုး အတွက် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ နဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းခွင့်ရှိပါတယ် ။ နေရာတစ်နေရာ မှာ တပ်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်အစိုးရ ရဲ့ ခွင့်ပြုမိန့် နှင့် အတူ မြေအတိုင်းတာ ပမာဏ ကို သက်ဆိုင်ရာမြေတိုင်းဌာနက တဆင့် တိုင်းတာပေးရတာပါ ။ ပြီးတဲ့ ခါ အဲဒီနေရာကိုတပ်နယ် ၊ တပ်ဧရိယာ အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် ။ အဲဒီ အခါ ကျမှ သာ တပ်မတော် က ခြံစည်းရိုးခတ်တာ ၊ တပ်တည်ဆောက်တာ လုပ်ရပါတယ် ။ တပ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုရာမှာ တခုပြောလိုတာ က ... တပ်ရဲ့ အလည်ဗဟို (သို့) စစ်ရေးအချက်ချာ နေရာမှာ တပ်ရဲ့ အဓိက ဗဟိုကင်း တပ်ဆောက်ပါတယ် ၊ လက်နက် ၊ အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း ၊ ခဲယမ်း စသဖြင့် ထားပြီး နေ့ညမပြတ်စောင့်ကြပ်ကြရတဲ့နေရာပါ ။ အဲဒီနေရာ ဟာ တပ်ရဲ့ ခြံစည်ရိုး တွေနဲ့ အနည်းဆုံး လက်နက် တစ်ကမ်းအကွာ မှာရှိမှ ရပါတယ် ။ လက်နက် တစ်ကမ်းမှီပြီဆိုရင် အပြင်ကနေ လာပစ်ခတ်မယ်ဆိုရင် ဗဟိုကင်း ကျဆုံးပါလိမ့်မယ် ။ ဗဟိုကင်းကျဆုံး ရင် တပ်ကျဆုံးတာပါပဲ ။ အဲဒီတော့ ဗဟိုကင်းကို မူတည်ပြီး ပတ်လည် မြေနေရာတွေ ယူထားတယ်ဆိုပါတော့ ... တချို့ နေရာတွေကို စစ်သည်တွေနေဖို့ ဘားတိုက်တွေ ၊ ရိပ်သာတွေ ၊ ရုံးအဆောက်ဦးတွေ လိုင်းခန်းတွေ တည်ဆောက်လိုက်တယ် ။ ပိုနေ ၊ လွတ်နေတဲ့ နေရာတွေရှိတယ် ။ အဲဒီနေရာတွေကို တပ် သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် သီးနှံတွေ စိုက်ကြတယ် ။ မူလ မြေပိုင်ဆိုင်သူ ပြည်သူတွေ အမြင်မှာကျတော့ ... တပ်မတော် က သူတို့ မြေသိမ်းပြီး ...သူတို့ယူစိုက်တယ်လို့မြင်ကြတယ် ။ တခု သိရမှာ က ကျွန်တော်တို့ စစ်သားတွေ စစ်တိုက်ချင်လို့ စစ်ထဲဝင်လာတာ စပါးစိုက်ချင်လို့ ဝင်လာတာ မဟုတ်ဘူး ။ ယောကျာင်္း ကစစ်တိုက် ၊ မိန်းမက ကောက်စိုက် ၊ သားကြီးတော့ ကောက်လှိုင်းပုတ် ၊ သမီးကြီးတော့ စပါးပြာ ... လုပ်ချင်လို့ လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး ။ မိသားစုတွေ ရှိတယ် ၊ အနာဂါတ်တွေရှိတယ် ၊ ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ရက်အတွက် ရိက္ခာ မြန်မာငွေ ၅၀၀ ကျပ်ကျော်နဲ့ မိသားစုဘယ်လို ထမင်းစားမလဲ ။ နိုင်ငံအနေနဲ့ ကြည့်ပြန်တော့လည်း နိုင်ငံသားဝင်ငွေ တစ်လ ၄၁ ဒေါ်လာ ပျမ်းမျှ ရှိတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီထက်ပိုပြီး ထင်စားစရာ ဘာတွေရှိမှာလဲ ။ အဲဒီတော့ တပ်ရဲ့ ဦးဆောင်သူ တွေဟာ စပါးမစိုက်ချင်လည်းစိုက် ၊ နွားမမွေးချင်လည်းမွေး ၊ ဝက်မကျွေးချင်လည်းကျွေး ဆိုတာတွေ စစ်သည်တွေ မလုပ် လုပ်ချင်အောင် ... ချော့လိုက် ၊ ချော့လိုက် နဲ့ ခိုင်းကြရတယ် ။ တခါတလေ တပ်တွေရှိတယ် ...တပ် ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်ဘူး ... ကောင်းတဲ့ လူတစ်ရာလောက်က တစ်နှစ်မှာ ၈ လစစ်ဆင်ရေးထွက် ၊ တပ်မှာကျန်ခဲ့တာ က ခြေပြတ် ၊ လက်ပြတ် ၊ အကန်း ... အဲဒီတော့ တပ်မှာကင်းစောင့်နိုင် ၊ နွားကျောင်းနိုင်တာ လောက်ပဲလုပ်နိုင်တယ် ။ အဲဒီတော့ တပ်ရဲ့ လယ်မြေတွေကို အပြင် က လူတွေကို သီးစားပြန်ချတယ် ။ အဲဒီ ခါ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မြင်ကြတာ က တပ် က လယ်တွေသိမ်းပြီး ကိုယ့်လယ်ကို အငှား နဲ့ သီးစားပြန်လုပ်ရတယ်လို့ မြင်တယ် ။ တကယ်တမ်း က ဒီလယ်ယာမြေတွေကိုတပ် မြေအနေနဲ့ အစိုးရ က စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးထားတဲ့ အတွက် သာ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ ချိန်မှာ တာဝန်ရှိသလို စီမံခန့်ခွဲတာပါ ။ ဒီတပ်မှာ ကျွန်တော် ၃ နှစ်တာဝန်ကျတယ်ဆိုရင် .. ဒီမြေတွေ ကိုကျွန်တော် ၃ နှစ် လုပ်ကိုင်ပေးရတယ် ။ နောက် တခြားတပ်ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားရင်ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်တော့ဘူး ။ တပ်မတော်သား တွေ ဟာမြေသိမ်းလို့ မရပါဘူး ။
အစိုးရတရပ်ဟာ ပြည်သူတွေ ကိုယ်စားပြုဖို့ ၊ အများကိုယ်စား ..ပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကြဉ်းဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူတွေ ပါ ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလမှာ အစိုးရ အဖွဲ့ရဲ့ အကြီးဆုံး သမ္မတ ဟာနိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ် ။ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အရေးအရာတွေ စီမံရာမှာလည်း ဥပဒေပြုအဖွဲ့ က စီရင်ပြုစုထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဥပဒေ များအရသာ စီမံခန့်ခွဲရတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၅၃ ခုနှစ် သမ္မတဦးဘဦး လက်ထပ်တည်း က လယ်ယာမြေ နိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေ အရ ...နိုင်ငံတော် မှာရှိတဲ့ လယ် ၊ ယာ မြေများကို နိုင်ငံတော်က သာပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဌာန်းတဲ့ လယ်ယာမြေဥပဒေ အခန်း (၁) ပုဒ်မ ၁ ရဲ့ အပိုဒ်ခွဲ (ဃ) မှာလည်း လယ်ယာမြေအားလုံးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာနိုင်ငံတော် ဖြစ်ပြီး ...ပြည်သူများ တောင်သူများကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်အသုံးချခွင့် ပြုထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ နောက် အခန်း (၁၀) ရဲ့ ပုဒ်မ ၂၉ မှာလည်း ( နိုင်ငံတော်၏ ရေရှည်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးများအတွက် လယ်ယာမြေကို အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန်သက်ဆိုင်ရာစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဝန်ကြီးဌာနသည် ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူပြီး ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ) ဟု ဆိုထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ... နိုင်ငံတော် နဲ့ ပက်သက်သော စီမံကိန်းတွေ ၊ စက်ရုံတွေ ၊ လမ်းတွေ ၊ တံတားတွေ ၊ ဆည်မြောင်းတွေ ၊ တပ်တွေ တည်ဆောက်ရမှာ ယခင်လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ၊ ပေါင်နှံရောင်းချခွင့် ပေးထားသော ပြည်သူများထံမှ ပြန်လည်သိမ်းယူခွင့်ရှိ နေတာဖြစ်ပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့ ပြန်လည်သိမ်းယူရာမှာတော့ လယ်ယာမြေဥပဒေ အခန်း ၉ ပုဒ်မ (၂၆) မှာ
( တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ နိုင်ငံတော်အကျိုးငှာဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူအကျိုးငှာ ဖြစ်စေ သိမ်းယူသည့်လယ်ယာမြေနှင့် ယင်းလယ်ယာမြေပေါ်၌ အဆောက်အအုံဖြင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ပြုပြင်ခြင်းအပါအဝင် မူလလယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ ဆောင်ရွက်ထားသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် နစ်နာမှု လုံးဝမရှိစေရန် လျော်ကြေးပေးခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို သက်ဆိုင်ရာက ပြုလုပ်ပေး နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုလယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ ) ဆိုပြီး သိမ်းယူခံရသော ပြည်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရန် အကာကွယ်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။
လယ်ယာမြေဥပဒေ ၂၀၁၂ ပြဌာန်းခါ စ ...ထွက်လာတဲ့ အသံတွေကို မှတ်မိနေပါတယ် ။ လယ်လုပ်သူ လယ်မပိုင်ရလို့ justice မဖြစ်ဘူးလို့ ဆိုကြသူတွေလည်းရှိပါတယ် ။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ ကို ကိုယ်စားပြု ကြတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ပြည်သူအားလုံးကိုကိုယ်စားပြု ကြတာဖြစ်လို့ စဉ်းစားကြတဲ့ ခါ ပြည်သူအားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာ ကျွန်တော်ဟာ လယ်သမား သားသမီးတစ်ယောက်မို့ ကိုယ့်လုပ်တဲ့လည် ၊ ကိုယ့်မိဘဘိုးဘွားပေးထားခဲ့ တဲ့လယ်ကို ကိုယ့်ဘာကို ဘာပဲ စိုက်စိုက်၊ ဘယ်သူ့ကိုပဲရောင်းရောင်း ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် စီရင်ချင်တာ ဟာ ကျွန်တော့် အတွက်သဘာဝကျပါတယ် ။ သို့သော် လူအများကိုကိုယ်စားပြု သူတွေ အနေနဲ့ ကျတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက်ဟာ တခြားတပါးသူတွေကို ဂယက်မရိုက်ဖို့လည်းထည့်စဉ်းစားကြရဦးမယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ နယ်စပ်တစ်နေရာမှာ မြေပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုပါတော့ တခြား နိုင်ငံကို ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်သောမြေ ကျွန်တော်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ..အဲဒီမြေဟာ မြန်မာ့မြေပုံထဲက ပါ ပဲ့ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ပြည်သူတွေအားလုံးကို လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ခွင့် ၊ ပေါင်နှံခွင့် ၊ ရောင်းချခွင့်ကို သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များနဲ့အညီ ခွင့်ပြုထားမယ် ..သို့ပေမဲ့ မြေယာအားလုံးရဲ့ မူလပိုင်ရှင်ဟာ နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးတစ်ပြေးညီပြဌာန်းပေးရတာမျိုးဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီ အကြောင်းရာတွေဟာ ကျွန်တော့် ဦးနှောက်နဲ့ ဥာဏ်မှီသလောက် ၊ ကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက် ၊ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ တွေ ပါ ပေါင်းစပ်ပြီး သုံးသပ်ထားတာပါ ။ ကျွန်တော်မမြင် နိုင်တဲ့ အကြောင်းရာများလည်း ရှိကောင်းရှိနေ နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒီအကြောင်းရာတွေမှာ ၊ ခုဖြစ်ပျက် နေတဲ့ ပြဿနာတွေ မှာ ဘယ်သူတွေ မှားသလဲ လို့ မေးလာရင် ... ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ဘယ်သူမှ မမှားပါဘူးလို့ပဲ ရိုးရိုးသားသားဖြေရပါလိမ့်မယ် ။ ခု ဒီကိစ္စ တွေ ဖြစ်နေသလို ၊ နောက်ထပ် လည်း ထပ်ဖြစ်လာဖို့ ရှိနေ လိမ့်ဦးမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ။ အားလုံး မမှားဘူးဆိုပေမဲ့ ပြဿနာ ကတော့ ဖြစ်နေပါတယ် ။ အဲဒီ အချက်တွေထဲ က နေ ၊ ဒီ အကြောင်းရာတွေ ထဲ ကနေ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာ နိုင်မှသာအဆင်ပြေမှာပါ ။ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူတွေ က လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူလိုတွေး ၊ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်သူတွေ အတွက်ပဲမြင် ၊ တပ်မတော်သားတွေကလည်း တပ်မတော်သားတွေလို တွေး ၊ တပ်မတော်သားတွေ အတွက်ပဲ ကွက်မြင် ၊ အစိုးရကလည်း အစိုး၇လိုတွေး အစိုးရလိုမြင် ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှည်များကလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လိုတွေး ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လိုပဲ မြင် ......အချင်းချင်း တွေ အပြစ်တင်နေလို့ မပြီးပါဘူး ၊ ဒါဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နစ်နာစေမဲ့ စကားတွေ နဲ့ တိုက်ခိုက်လိုက်လို့ လည်းပြီးမသွားဘူး ။ အဖြေရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တွေးမိတဲ့ အတွေး စတွေ ကနေ တဆင့် စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင်တွေးပြီး ... ပြဿနာရဲ့ အဖြေ ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ် ။
8:18:00 PM Myanmar Newsupdates2comments
."အင်တာနက်ကို မုန်းတယ်.... မိန်းမတွေကို မုန်းတယ်... ကိုယ့်ကိုယ်ကို
"အင်တာနက်ကို မုန်းတယ်.... မိန်းမတွေကို မုန်းတယ်... ကိုယ့်ကိုယ်ကို
တစ်ခါတရံ ကျွန်မ မျှော်လင့်မထားသော စကားများကို သူပြောတတ်သည်။ ထိုစာရသော
အချိန်တွင် တိုက်ဆိုင်စွာ ကျွန်မမှာ ကော်ဖီသောက်နေသည့်အချိန် (သို့)
သူအမြဲဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ chatroom ထဲဝင်တိုင်း မေ"မှလွဲ၍ မည်သူနှင့်မျှ
ချိုချိုလေးများကြား သူမိန်းမော သာယာနေခဲ့မိသည်။ ကြာတော့ အင်တာနက်ထဲတွင်
ပြောရသည်ကို သူ အားမရတော့။ မေ"ကို အပြင်လောကတွင် သူတွေ့ချင်လာသည်။
လူကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီး မေ"ကို ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ်ချင်မိသည်။ မေ" ကိုအပြင်တွင်
တွေ့ရန်၊ ဖုန်းဆက်ခွင့် ပေးရန် သူတောင်းဆိုမိသည်။ မေ"က တောင်းဆိုမှုတွေ
များလွန်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ခွင့်မပေးနိုင်ကြောင်း အပြင်းအထန်
ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့အပေါ် မေ"၏ဆက်ဆံမှုများက အေးစက်လာခဲ့သည်။
မေ"ပို့လာသော စာကြောင်းများကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် သူ့အပေါ်တွင်
ညတိုင်း သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် သူသည် အချိန်တိကျစွာ onlineပေါ်သို့ ရောက်လာပြီး
သူနှင့်မေ"၏ ပုံပြင်ကို ကျွန်မအား ပြောပြတတ်သည်။ တစ်ခါတရံ သူ၏လုပ်ရပ်များကို
ကျွန်မ မထောက်ခံမိသော်လည်း ညတိုင်း online တက်ပြီး သူပြောသော ပုံပြင်ကို
ကျွန်မ ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိတော့။ တစ်ခါတလေ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပင် အနားတွင်
သူရှိနေသည်ဟု ယုံမှား သံသယ၀င်မိတတ်သည်။ ၀ိညာဉ်၏ သံလိုက်ဓာတ်နှင့် အင်တာနက်၏
သံလိုက်လှိုင်းများ တစ်ခါတရံ ဆွဲငင်တတ်သည်ဟု သူငယ်ချင်းများက ပြောဖူးသော်လည်း
ကျွန်မ အယုံအကြည် မရှိခဲ့။ ထူးဆန်းသည်မှာ သူ့ကို ကျွန်မနည်းနည်းမှ
အိပ်ပျော်ပြီး သိပ်မကြာလိုက် စိတ်ထဲတွင် တကယ့်အဖြစ်လိုလို အိပ်မက်လိုလို
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် ကျွန်မအခန်းထဲသို့ ၀င်လာသည်ဟု ခံစားမိသည်။
ကျွန်မထထိုင်ဖို့ ကြိုးစားသော်လည်း ဘယ်လိုမှ ထမရခဲ့။ ထိုယောက်ျားလေးမှာ
အပြာနုရောင် ည၀တ်အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားသည်။ ရုပ်ရည်မှာ သန့်ပြန့်နေသော်လည်း
မျက်နှာမှာ သွေးဆုတ်ပြီး ဖြူရော်နေသည်။ အကြည့်မှာ နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ကျွန်မ
ကုတင်နားသို့ ချည်းကပ်လာပြီး ကျွန်မ၏ဆံပင်များကို ပွတ်သပ်နေသည်။ ထို့နောက်
ဟုပြောပြီး ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကျွန်မမျက်စိကို အားယူဖွင့်လိုက်မိသည်။ နာရီကို
ကြည့်လိုက်တော့ ည ၁၂နာရီ ၁၀မိနစ်။ ကျွန်မ ကုတင်ပေါ်မှ ခုန်ဆင်းပြီး ကွန်ပျူတာကို
အလျှင်အမြန်ဖွင့်လိုက်သည်။ လိုင်းချိတ်နေချိန်တွင် ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ တကယ်လား၊
အိပ်မက်လား ဆိုသည်ကို ကျွန်မ တွေးနေမိသည်။ အိပ်မက်ဖြစ်သည်ထားဦး.. ဘာကြောင့်
ထိုလူ့ ရုပ်ရှည်ကို ကျွန်မကောင်းကောင်း မှတ်မိနေပါလိမ့်။ ကျွန်မ
ဝေခွဲမရဖြစ်နေချိန်တွင် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် စာတစ်ကြောင်းပေါ်လာသည်။
စာကြောင်းရေးပို့လိုက်သူမှာ ကျွန်မနှင့် ညတိုင်း chatting လုပ်နေသော သူ့ကိုယ်သူ
တစ္ဆေသရဲပါဟု ပြောသော midnight.... ကျွန်မ အသက်ရှူဖို့ ခေတ္တမေ့နေခဲ့ပြီး
ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပေါ်က စာကိုသာ မျက်တောင်မခတ် ကြည့်နေမိသည်။ သူဟာ ကျွန်မလို
လူစင်စစ်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ အသိပေးနေမိသည်။
"ရှင်အခု ဘယ်မှာလဲ... ကျွန်မ အခန်းထဲမှာပဲလား.. ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား" ကျွန်မ
တစ္ဆေတစ်ကောင်ကို ကျွန်မချစ်မိသွားပြီလား... ဘယ်လောက် စိတ္တဇဆန်တဲ့
ည ၁၂ နာရီ ၀၁ မိနစ်... နံရံပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသော နာရီလက်တံ၏ တစ်ချောက်ချောက်
အသံမှလွဲ၍ တစ်ခန်းလုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ဒီည သူလာပါဦးမလား...။မနေ့ညက ကျွန်မ
အပြုအမှုကြောင့် ဒီည သူထပ်လာပါ ဦးမလား...
"အင်း... ပြောမယ်။ ကျွန်မသိချင်တာတွေ မေးရဦးမယ်" ကျွန်မ အသက်ကို ပြင်းပြင်းလေး
ကြိုးစားမယ်လို့လည်း ပြောခဲ့တယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲ ကျွန်တော့်ကို သူတွေ့မယ်လို့
ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ သူနဲ့တွေ့ရမဲ့ရက်မှာ ကျွန်တော်စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ သူ့ကို
တွေ့တာနဲ့ သူမှန်း ကျွန်တော်မှတ်မိနေခဲ့တယ်။ သူအရမ်းလှတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲကထက်တောင်
ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ တက်လာသော စာများကို ဖတ်ရင်း ကျွန်မမျက်တောင်ခတ်ဖို့
"ဟင့်အင်း... ကျွန်မ မေးဖို့ မေးခွန်းတွေ ကျန်နေသေးတယ်" ကျွန်မ ခေါင်းရမ်းရင်း
မမျှော်လင့်သော စာကြောင်းကြောင့် ကျွန်မယောင်ရမ်းပြီး လက်ကို ကြည့်လိုက်မိသည်။
ကျွန်မ ခံစားလို့ မရခဲ့...သို့သော် နွေးထွေးသော လက်တစ်စုံက ကျွန်မလက်ကို
တစ္ဆေတစ်ကောင် ကျွန်မ အခန်းထဲတွင် အစောကြီးကတည်းက ရှိနေသည်ကို ကျွန်မ
မသိခဲ့ပါလား.. ကျွန်မ၏ နေ့စဉ် အပြုအမှုများကို သူစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါလား...။
ထိုသို့ တွေးမိလိုက်စဉ် ကျွန်မပါးနှစ်ဘက် အပူကြောင့် ရှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားသည်။
"တရားတယ်၊ မတရားဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ၀ိညာဉ်တွေက ဒီလိုပဲ
လျှောက်သွားနေတတ်တယ်လေ။ ခင်ဗျားနဲ့ ခင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်
"ကျွန်တော်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆေးရုံမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်။ မေ့မြောနေဆဲမို့ သူတို့က
"ရှင်ရဲ့ ပွေ့ဖက်မှုကို ကျွန်မ ခံယူချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုမဟုတ်သေးဘူး။ တကယ့်
လူတစ်ယောက်အဖြင့်နဲ့ ပွေ့ဖက်မှုကို ကျွန်မ ခံယူချင်တယ်"
"၀င်သွားပြီးနောက်ပိုင်း ခင်ဗျားနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ကျွန်တော် သတိမရတော့မှာကို
"ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်သလား..ကျွန်မကို မေ့သွားမှာလား" ကျွန်မစိတ်ပူစွာ
ပြန်သွားပြီး သူ သတိမရခဲ့လို့ ကျွန်မကို လာမရှာနိုင်ချင်နေပါစေ။ ကျွန်မကြောင့်
သူသည် ခိုကိုးရာမဲ့ ၀ိညာဉ်တစ်ကောင်တော့ မဖြစ်စေချင်ပါ။
"ခင်ဗျား စကားကို ကျွန်တော် နားထောင်မယ်။ ကျွန်တော့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ပြန်ဝင်မယ်။
ကျွန်တော့် ပြန်အလာကို စောင့်နေမလား"
"ကျွန်မ စောင့်နေမယ်။ တစ်သက်လုံး စောင့်နေမယ်။ ကျွန်မကို မေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်
ရှင်သတိရပြီး ကျွန်မကို ပြန်မှတ်မိလာတဲ့အထိ စောင့်နေမယ်"
ကျွန်မပြောရင်း ရင်နင့်မိသည်။ မျက်ရည်များက အတားအဆီးမဲ့စွာ စီးဆင်းလာပြန်သည်။
သူ ကျွန်မအနားက ပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်ဆိုတာ ရာခိုင်နှုန်း တစ်ဝက်က သေချာနေပြီ။
ရင်ထဲ စူးနေအောင် နာကျင်လာမိသည်။
နာရီလက်တံများ တစ်စက္ကန့်ပြီး တစ်စက္ကန့် ရွေ့နေသည်။ ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်
သူ၏ စာများ ထပ်ပေါ်မလာတော့။ ကျွန်မ ထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း အားရပါးရ
ငိုလိုက်မိသည်။ အိပ်မက်ထဲက သူ့ပုံရိပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်ထားရန် ကိုယ့်ကိုယ်
သတိပေးလိုက်မိသည်။ သူသည် အချိန်မရွေး ကျွန်မရှေ့တွင် ပေါ်လာနိုင်သည်။
ထိုအချိန်ရောက်လျှင် အလှပဆုံးပြုံးလျှက် သူ့ကို နွေးထွေးစွာ ကျွန်မကြိုမည်။
သူမလာမှန်း သိနေလျှက်နှင့် ညသန်းခေါင် ၁၂နာရီရောက်တိုင်း ကျွန်မ online ပေါ်သို့
ပြက္ခဒိန် စာရွက်များ တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက် ကြွေကျကုန်သည်။ လူသွားလူလာများကြားတွင်
သူ့ကို ကျွန်မ လိုက်ရှာနေမိသည်။ ကျွန်မကိုတွေ့လျှင် ကျွန်မနှင့်
ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသမျှ သူ မှတ်မိနေမည်ဆိုသည်ကို ကျွန်မ ယုံကြည်နေမိသည်။
ကျွန်မ အသိစိတ်ထဲက ရုပ်ပုံလေး၊ ကျွန်မနှင့် ရင်းနှီးသော ရုပ်ပုံလေး။ ခန္ဓာကိုယ်
အနည်းငယ် ဖွံ့ဖြိုးသည်ကလွဲ၍ အိပ်မက်ထဲက ရုပ်ပုံနှင့် တစ်ထပ်တည်း။
"ဆောရီးပဲနော်.. တော်တော်လေး ကျန်းမာဖို့အတွက် အချိန်ယူနေရလို့ပါ။ လုံးဝ
နေကောင်းသွားပြီဆိုမှ ကျွန်တော် လာတွေ့ရဲတယ်လေ"
7:57:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အတ္တတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဘ၀
မာနတွေနဲ့ မွန်းကြပ်နေတဲ့ ခန္ဓ္ဓာ
ပကာသနတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်တဲ့ အလှ
ကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့မင်းရဲ့ ဘ၀
ငါမြင်နေတဲ့ မင်းရဲ့ အသွင်
ဘ၀ကို အတ္တစိတ်နဲ့ ရှင်သန်
မာနခြေ လှမ်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်း
ချိုသာတဲ့ အပြောလေးတွေနဲ့ ဖျားယောင်း
တောက်ပ ရွှန်းလဲ့တဲ့မင်းအကြည့် တချက်အောက်
ဘယ်မှာလည်း စစ်မှန်တဲ့ မင်းအလှ
မင်းရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဖယ်ခွါ
အစားအစာမှ ရယူနိုင်သော နှလုံးကျန်းမာစေသည်များ
အစားအစာမှ ရယူနိုင်သော နှလုံးကျန်းမာစေသည်များ ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာဖို့ နေ့စဉ်စား သောက်နေတဲ့ အစားအသောက် တွေကနေ ကစီဓာတ်၊ အသားဓာတ်၊ ရေ၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေကို ရယူရပါတယ်။ နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအ သောက်တွေကနေ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာ မင်နဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေ အပြည့်အဝ ရရှိပါရဲ့လား။ နှလုံးကျန်းမာ ဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ ရွေးချယ်စားဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
ဗာဒံစေ့ ကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက နှလုံးနဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားကို ကောင်းမွန်စေ ပါတယ်။ ဗီတာ မင်ဘီနဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်က စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင်ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးပါ တယ်။ ဇင့်က စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကို လျှော့ချပေးတာကြောင့် နှလုံးကျန်း မာရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါ တယ်။ ဗီတာမင်အီးရဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင်က နှလုံးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်။
ကညွတ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်တွေက ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံး ကျန်းမာရေးကို အထောက် အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ အပူပေးပြီးချက်တဲ့အခါ အာဟာရဓာတ်တွေ မဆုံးရှုံးအောင် အချိန်ကြာကြာ ချက်ပြုတ် တာကို ရှောင်ပါ။
ပဲအမျိုးမျိုးကနေ ပရိုတင်းဓာတ်ကို များစွာရရှိနိုင်ပြီး နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ စိတ် ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးတဲ့ ဗီတာမင်ဘီအုပ် စု၊ သံဓာတ်နဲ့ ကယ်လ်စီယမ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ် များစွာပါဝင်ပါတယ်။ သွေး တွင်း မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စ ထရောအဆီတွေကို လျှော့ချပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းစေပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီးသီးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် စီများစွာ ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါ မဖြစ်ပွား အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အမျှင် ဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီး ဝမ်းချုပ်တာမဖြစ် အောင်လည်း ကာ ကွယ်နိုင်ပါတယ်။
အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ ဗီတာမင်စီက အရိုး၊ သွားနဲ့ ဆံပင်တွေကို သန်မာစေပါတယ်။ ဗီတာမင်အေနဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်စိတ်တည် ငြိမ်အေးချမ်းစေပါတယ်။
အဆီထုတ်ထားတဲ့ အသားတွေ စားသုံးတာက ဇင့်၊ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင်ဘီ အုပ်စုတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ စိတ် ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းစေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်အေး ချမ်းမှုကို ရရှိစေပါတယ်။ စိုးရိမ်သောက ကင်းဝေးတဲ့ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဆီများသောငါး
အဆီများတဲ့ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ဆာ ဒင်းငါးတွေ စားသုံးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အ တွက် လိုအပ်တဲ့ အိုမီဂါ-၃၊ ဗီတာမင် ဘီ-၆၊ ဘီ-၁၂ ကို ရရှိစေပါတယ်။ အိုမီ ဂါ-၃ က နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန် စေတဲ့ အဆီပါ။ ဗီတာမင် ဘီ-၁၂ က စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတဲ့ ဆီရိုတိုနင် ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးပါတယ်။
စပျစ်သီးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် တွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ သွေးကြောအ တွင်း နိုက်ထရစ်အောက် ဆိုက်တွေများ စေပြီး သွေးခဲမှုကို မဖြစ်အောင် တားဆီး ပေးတာကြောင့် နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပြီး သား ဖြစ်စေပါတယ်။
ထောပတ်သီးက နှလုံးကို ကျန်းမာ စေတဲ့ အစားအစာတစ်ခုပါ။ မပြည့်ဝဆီတွေ များစွာပါဝင်တာကြောင့် သွေးတွင်း မကောင်းတဲ့အဆီတွေ လျော့နည်းစေပြီး ကောင်းတဲ့အဆီတွေ များစေပါတယ်။ ထောပတ်သီးမှာ ပါဝင်တဲ့ လိုင်ကိုပင်းက နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လို အပ်ပါတယ်။
သစ်ကြားသီးကို သရေစာ အဖြစ် စားသုံးပါက နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကောင်း မွန်စေတဲ့ အိုမီဂါ - ၃၊ အယ်လ်ဖာ လိုင်နို လစ်အက်စစ် စတာတွေကို ရရှိနိုင်ပါ တယ်။ သစ်ကြားသီးကို နေ့စဉ် သရေ စာအဖြစ် စားသုံးပေးပါက မကောင်းတဲ့ အဆီတွေကို လျှော့ချပေးပြီး နှလုံးကျန်း မာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဆာ လောင်မှုမရှိဘဲ ကျေနပ်မှုဖြစ်စေတာ ကြောင့် ကိုယ်အလေး ချိန်လျှော့ချလိုသူ တွေအနေနဲ့ စားသုံးသင့်ပါတယ်။
သင့်မနက်စာမှာ အုတ်ဂျုံစားပေး တာကြောင့် အမျှင်ဓာတ်များစွာ ရရှိစေ ပါတယ်။ အုတ်ဂျုံက နှလုံးကျန်း မာစေဖို့ သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော အဆီတွေကို လျှော့ချပေးပြီး ကောင်းတဲ့ အဆီတွေကို များစေပါတယ်။
ပန်းသီးတစ်လုံး နေ့စဉ်စားပါက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ပန်းသီးမှာ ဗီတာမင် စီ၊ ပက်ပ်တင်တွေ ပါဝင်ပြီး မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော အဆင့်ကို ကျဆင်းစေပြီး နှလုံးကို ကျန်း မာစေပါ တယ်။
ကန်စွန်းဥမှာ အင်တီအောက်ဆီး ဒင့်များစွာပါဝင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ ဓာတ်တိုးမှုဖြစ်စဉ်တွေကို ဟန့် တားပေး ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းမှုတွေကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို များစွာအထောက် အကူဖြစ်စေပါ တယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေ တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေက နှလုံးကျန်းမာရေးကို များစွာ အထောက် အကူဖြစ်စေ ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ချက်စားပါက ဗီတာမင် စီဓာတ် လျော့နည်းသွားပေမယ့် လိုင်ကို ပင်းတွေ ပိုမို များလာပြီး အင်တီအောက် ဆီးဒင့်အာနိသင်တွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
7:11:00 PM Myanmar Newsupdates 8 comments
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆော့လိပ် စီတီး မြို့မှ တိရိစ္ဆာန် ညှင်းဆဲ မှု
7:11:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
From : ..MON
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆော့လိပ် မြို့တွင် မြို့ တွင်း အား ဇိမ်ခံ ကြည့်ရှု သည့်
အပျော်စီး မြင်းလှည်း မောင်းသူ တစ်ဦး သည် ပူပြင်း သည့် နေရောင်အောက် တွင် ဒဏ်ရာ ရှိသည့် မြင်း ကို မညှာမတာ စေခိုင်းမှု ကြောင့် မြင်းကြီး ဂျယ်ရီ လဲ ကျ သွားရာ
ဂျယ်ရီ ၏ ပိုင်ရှင်း ကုမ္ပဏီ နှင့် မြင်း လှည်း မောင်း သမား
မှာ အကြီး အကျယ် ကန့် ကွက် ဝေဖန် မှု များ နှင့် ကြုံတွေ့ နေရသည်။
မြို့ တွင်း ရှိ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ကြီး အား လှည့်ပတ် ကြည့်ရှု ရန် အတွက် ထား ရှိသည့် အဆို ပါ အပျော်စီး မြင်းလှည်း များ အား ထားရှိ
သည့် မြို့အုပ် ချုပ် ရေး ကောင်စီ ကို တရိစ္ဆာန် ချစ်သူများ က ဆန္ဒ ပြ
ကန့် ကွက် ရန် စီစဉ် နေသည် ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အာဆီယံ ယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအသင်း နောက်ဆုံး လူစာရင်း ထုတ်ပြန်
6:59:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အာဆီယံ ယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ် မြန်မာအသင်း ပွဲစဉ်များ မြ၀တီရုပ်သံမှ Live ပြသမည်
သြစတြေးလျ ယူ-၁၆ လက်ရွေးစင် အသင်း ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းတွင် လေ့ကျင့်စဉ် (Photo: Tun Tun Aung)
နေပြည်တော် ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းတွင် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည့် အာဆီယံ အသက် ၁၆ နှစ်အောက် အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ (AFF U-16 AYA BANK Championship 2013) ပွဲစဉ်များမှ မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် ယူ-၁၆ အသင်း ကစားမည့် ပွဲစဉ်များနှင့် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ၊ ဗိုလ်လုပွဲ ပွဲစဉ်များကို မြ၀တီ ရုပ်သံမှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပြသသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ ယူ-၁၆ အသင်း အနေဖြင့် အုပ်စု(က)တွင် ဗီယက်နမ်၊ သြစတြေးလျ၊ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား အသင်းများနှင့် အတူ ကျရောက်နေပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်ရောက်ခွင့် အတွက် သြစတြေးလျနှင့် ဒေသတွင်း ပြိုင်ဘက် ဗီယက်နမ်ကို အဓိက ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမည် ဖြစ်သည်။ အခြား အုပ်စုတွင် အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊လာအို၊ စင်ကာပူနှင့် ဖိလစ်ပိုင် အသင်းတို့ ပါဝင်နေပြီး အုပ်စု(ပ)(ဒု)နှစ်သင်းစီ ဆီမီးဖိုင်နယ် ပွဲစဉ်များ ယှဉ်ပြိုင် ကစားရမည် ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအား ဧရာဝတီ ဘဏ်မှ Title Sponsor အဖြစ် ပံ့ပိုး ကူညီထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ ယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် Title Sponsor ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
(ပွဲစဉ်များ အားလုံး ၀ဏ္ဏသိဒ္ဓိ ကွင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားမည် ဖြစ်သည်)
မြန်မာ ယူ-၁၆ အသင်း ပွဲစဉ်များ
၂၀-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) မြန်မာ - ဗီယက်နမ်
၂၂-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) မြန်မာ - သြစတြေးလျ
၂၆-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) မြန်မာ - ဘရူနိုင်း
၂၈-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) မြန်မာ - ကမ္ဘောဒီးယား
၃၁-၈-၂၀၁၃ (၄း၀၀) အကြို ဗိုလ်လုပွဲစဉ် (၁)
၃၁-၈-၂၀၁၃ (၆း၄၅) အကြို ဗိုလ်လုပွဲစဉ် (၂)
၂-၉-၂၀၁၃ (၄း၀၀) တတိယ နေရာလုပွဲ
၂-၉-၂၀၁၃ (၆း၄၅) ဗိုလ်လုပွဲ
6:56:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
- ၁ ဂရမ် ပမာဏရှိသော ရွှေကို အပြားခတ် မယ်ဆိုရင် ၁ စတုရန်းမီတာ အထိ ကျယ်ပြန့်နိုင်ပါတယ်။ ၁ အောင်စဆို စတုရန်းပေ ၃၀၀ အထိ ဖြန့်နိုင်တဲ့အတွက် တော်တော်ကို ထူးခြားတဲ့ သတ္တုဒြပ်စင်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
- ရွှေကနေ ထွက်တဲ့ အရောင်က အနီနဲ့ အဝါ ခပ်တောက်တောက် ရှိပြီး သာမန်မမြင်နိုင်တဲ့ ရောင်ခြည်တွေကို တားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာသာယဉ်နဲ့ ဝတ်ဆုံမှာ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်မထိ အောင် ရွှေအလွှာခံတဲ့ မှန်တွေကို အသုံးပြု လေ့ ရှိကြပါတယ်။
- ရွှေကို အခြား သတ္တုတွေနဲ့ ရောစပ် အသုံးပြုခြင်းကလည်း ရေပန်းစား ပါတယ်။ အခြား သတ္တု တစ်ခုခုကို ရွှေရောလိုက်ခြင်းဖြင့် ပိုမို မာကျော သွားခြင်း၊ အကြမ်းခံခြင်း၊ သန်မာခြင်း တို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး လျှပ်ကူးပစ္စည်း တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေခိုးရေငွေ့၊ ရေ၊ တိုက်စားနိုင်သော အခြားသော ဓာတုဓာတ်များနဲ့ ဓာတ်မပြုနိုင်ပဲ ပုံမှန် အနေအထားအတိုင်း အမြဲ တည်ရှိ နိုင်ပါတယ်။
အဓိကကတော့ တာရှည်ခံမှုပါပဲ။ ဘယ်လောက်ပဲ နှစ်တွေပြောင်းသွား ပါစေ ရွှေဟာ သူ့နဂိုအတိုင်းပဲ ကျန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီက လူသားတို့ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရွှေတွေကို ပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့အခလါ ပုံမပျက်ကို ပြန်တွေ့ရ ပါတယ်။ အပူကြောင့် အရည်ပျော်မယ်ဆိုရင်တောင် ပြန်အေးပြီး ခဲတဲ့အခါ အရင် အတိုင်းပါပဲ။
နောက်ထပ် အရေးကြီးတဲ့ အချက်က ရှားပါးမှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါပေါပဲပဲရနေရင် ဒီလောက် တ်ဖိုး ထားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလွယ်တကူ မရနိုင်တဲ့အတွက်လည်း ရွှေကို တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
အရောင်ကလည်း တောက်တော့ အလှဆင်ဝတ်လို့ တင်တယ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေးယခင်က ငွေကြေးအဖြစ်တောင် ရွှေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ရွှေကို အတုံးလိုက် အသုံပြုရာကနေ အင်္ဂါးလို လှလှပပ ဖန်တီး အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်တော့ ငွေသတ္တုနဲ့ တွဲသုံးလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ ရွှေကို အလှဆင်ဝတ်ဖို့ရန်ပဲ အသုံးပြုတဲ့ အနေအထား သို့ ရောက်လာပါတယ်။
ရွှေကို ပိုက်ဆံ (ငွေကြေးယူနစ်) နေရာမှာ အသုံးပြုနေရာကနေ ပိုက်ဆံကို တန်ဖိုးဖြတ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်း အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ ရွှေရဲ့  အသုံးဝင်မှုက တော်တော်လေး စိုးမိုးနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး၊ ငွေဈေး၊ ရေနံဈေး ဆိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ ဈေးသုံးဈေးမှာ ရွှေ ကလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အားအကြီးဆုံး သတ္တဝါ နှင့် ထူးခြားချက်
6:54:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ကြံ့ ပိုးကောင် လို့ ခေါ်တဲ့ Dynastinae သို့မဟုတ်Rhinocerous beetle ကို ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံး သတ္တဝါ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို သူက မိမိ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ထက် အဆ ၈၅၀ လေးတဲ့ အရာဝတ္တုများ ကိုတောင် သယ်ဆောင် နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဆိုဒ်၊ သူ့အရွယ်၊အလေးချိန်နဲ့ အဆက်ပေါင်း ၈၅၀ မနိုင်တယ်ဆိုတာ Dynastinae မှာပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် သူ့ကို နွားချေးပိုးကေင်လို့ နယ်အချို့ မှာ ခေါ်ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ဆိုရင် လောင်းကစား အတွက် ယင်းပိုးကောင်ကို အသုံးပြုလေ့ ရှိပါတယ်။
သူ့မှာ ထူးခြားချက် တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ ယင်းကတော့ ရည်းစား လုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြံပိုးကောင် အမ တစ်ကောင်ကို အထီး နှစ်ကောင် က တွေ့တဲ့အခါ တရားမျှတတဲ့ နည်းနဲ့ ကြိုးစားယူပါတယ်။ ဒီအတွက် တိုက်ပွဲ တစ်ခုလုပ်ပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ယင်းသို့ တိုက်ခိုက်ရာမှာ တစ်ကောင်ကောင်က ရှုံးသွားရင် ယင်းအမကို လက်လျော့ပေးလိုက် ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကြံပိုးကောင်များဟာ အင်အားသုံးပြီး တရားမျှတတဲ့ နည်းနဲ့ ယူပါတယ်။ ကြံပိုးကောင် အမကလည်း အနိုင်ရသူကိုပဲ ရွေးချယ် ပါတယ်။
Dynastinae မျိုးစိတ်ကွဲ ပေါင်းစုံကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
6:48:00 PM Myanmar Newsupdates2comments
6:43:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
From : ..အဖြူရောင် သူငယ်ချင်း
သီရိဓမ္မာသောကမင်း(သို့) အသောမင်းကြီး၏ သာသနာပြု
နယ်မြေထဲတွင် ယနေ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ဟုခေါ်သည့် နိုင်ငံသည်
လည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ရက္ခိတမထေရ်မြတ်” အမှူး
ပြုသည့် မထေရ်မြတ်ငါးပါး သာသနာပြုခဲ့ရာနယ်မြေဟု ဆက်စပ်
အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် ရှေးက ဗုဒ္ဓဘာသာအလွန်ထွန်းကားခဲ့ကြောင်းကို
စေတီပျက်များ၊ ကျောင်းကန်ပျက်များ၊ ရုပ်ပွားတော်ပျက်များ ကြည့်ရှု့
လေ့လာခြင်းဖြင့် ငြင်းမရသော သမိုင်းအထောက်အထားတို့ရှိခဲ့သည်။
အေဒီ (၅၇၀)တွင် “ဟဂျရတ်မုဟမ္မာဒ်” ပေါ်လာပြီးနောက် တိုင်းပြည်
အများအပြားကို စစ်ရေးဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူမျိုးပွား၍လည်းကောင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာပြန့်ပွားအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော အာရပ်မွတ်စလင်
တို့သည် အေဒီ (၆-ရာစု မှ ၇-ရာစု)အတွင်းတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်ကို
( အေဒီ ၆၀၀ ) အာရပ်မူဆလင်များသည် ပါရှားကိုအောင်နိုင်ပြီး နောက်ဘက်
တားရီးယားဒေသ ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပြီး ဗုဒ္စဘာသာထွန်းကားရာ
ဘော်လ်ကာဒေသ ( Balka )သို.ပါ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အေဒီ (၇) ရာစုတွင်
အာဖဂန်သို. မူဆလင်များစတင်ရောက်ရှိလာပြီး (၁၀)ရာစုသို.ရောက်သောအခါ
တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး အစ္စလမ်ဘာသာ သို.ရောက်ရှိခဲ.သည် ။ (၁၁) ရာစု တွင်မူ
ဗုဒ္စဘာသာသည် အာဖဂန်နစ္စတန်မှ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည် ။
များပြားလှသော ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ၊ စေတီပုထိုးများနှင့် ဘုရား
ကျောင်းကန်များကို ဖျက်စီးခဲ့သည့်အနက် မျက်မှောက်ခေတ်ကာလ
မကြာသေးမှီက နောက်ဆုံးဖျက်စီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ ရက်နေ့ကား ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၀င်တို့၏ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ မြေခခဲ့ရသော နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။
ကုလသမ္မဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် “ကိုဖီအာနန်” ဆောင်ရွတ်နေစဉ်
ကာလ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အာဖဂန်နစ္စတန်တွင် မွတ်စလင်လူမျိုး
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြွများ အုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလ
အာဖဂန်နိုင်ငံ၊ ဘာမီယန်မြို့၌ သဲကျောက်နံရံကြီးများတွင် ထွင်းထုပူဇော်
ထားသော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀)ကျော် သက်တမ်းရှိသည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး
ရပ်တော်မူ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများအား “မူလစ်မိုဟာမတ်အိုမာ” ခေါင်း
ဆောင်သည့် မွတ်စလင်စစ်သွေးကြွများက ဖျက်စီးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
“ဒီရုပ်တုတွေဟာ အစ္စလာမ်မြေပေါ်မှာရှိနေတာဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့
တားမြစ်ချက်ကို ချိုးဖောက်စော်ကားတာပဲ .. ဒီရုပ်တုတွေဟာ မှားယွင်းတဲ့
အယူဝါဒကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက် ဖျက်စီးရမယ့်စာရင်းထဲမှာပါဝင်တယ် ..
ဒီရုပ်တုတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နောက်နောင်ကိုးကွယ်ခွင့်မရအောင်
ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံများ၊ ကုလသမ္မဂ၊ ကမ္ဘာ့ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
UNESCO (ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့) များ တားမြစ်
ကန့်ကွက်သည့် ကြားမှပင် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ရက်နေ့တွင် ပေ(၃၀၀)ခန့်
မြင့်သည့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများကို စနစ်တကျ မိုင်းဆင်၍လည်းကောင်း၊
ဒိုင်းနမိုက်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ပစ်အမြှောက်များ၊ ဒုံးကျည်များဖြင့်
ပစ်ခတ်ဖျက်စီးခဲ့သည်။ များစွာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ၀မ်းမြောက်
“အစ္စလာမ်အမည်ခံပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှအကျိုးမရှိစေသည့် လုပ်ရပ်ကို သူတို့လုပ်
နေကြတယ်..ဒီလုပ်ရပ်ကို ကမ္ဘာ့အရပ်အသီးသီးက ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး
ဆိုတာကို ကျုပ်ပြောရဲတယ်” ဟု ဆိုခဲ့သော်လည်း မည်သည့် အစ္စလာမ်နိုင်ငံများကမှ
အမှန်မှာမူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ “ကုအာရ်”ကျမ်းပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း
ရုပ်တုကိုးကွယ်သည့် ဘသာဝင်များအား ရန်သူများအဖြစ် ရည်ညွှန်းထားသည်ဖြစ်ရာ
ငြိမ်းချမ်းသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ အနိုင်ကျင့်စော်ကားရာ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များအား ဖျက်စီးအပြီး ညအချိန်သို့ရောက်သော် အပျက်အစီးများ
အပေါ်၌ ကျမ်းစာရွတ်ဖတ်၍ အောင်ပွဲခံကြ၏။
အဆိုပါ ဘာမီယန်ဒေသရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးများ ဖျက်စီးခံရသည့်ပုံကို CNN သတင်း
ဌာနအပါအ၀င် ကမ္ဘာ့သတင်းဌာနများမှ ထုတ်လွှင့်ပြသသောအခါ မြန်မာအပါအ၀င်
ထည်ဝါခံ့ညားခဲ့သည့် ရပ်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များမှာ ပြိုပျက်နေသော အပိုင်းအစများ၊
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဦးခေါင်းပျက်များ နေရာအနှံ့ပျံ့ကျဲနေပုံကို ငိုကြွေးရင်းဖြင့် ကြည့်ရှု့နေခဲ့
မည်သူမှမတတ်နိုင်၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှ ကြားဝင်ညှိနှိုင်း၍မရ အစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်တို့၏ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများစွာထဲမှ နောက်အကျဆုံး
ချေမှုန်းစော်ကားမှုဖြင့် အဆိုပါ ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၂ရက်နေ့ကား ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓဘာသာ
၀င်များ၏ မျက်ရည်ပေါင်းများစွာ မြေကျခဲ့ရခြင်းဖြင့် အာဖဂန်နစ္စတန်မြေပေါ်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ
10:29:00 AM Myanmar News Updates No comments
"ရှစ်ပြည်နယ် jပည်ထောင်စုဆိုတဲ့ ဟာမျိုးက လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းကွာဝေးနေတယ်။ အဓိကကတော့ အခုတိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုက ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်တော် ဗမာအမျိုးသားများက အများစုနေတဲ့ ဒေသပေါ့။ အရင်က ပြည်မပေါ့ဗျာ။ ဒါကို တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခု ပြန်ခွဲလိုက်တာပေါ့။ အဲဒါကို တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုအဖြစ် သဘောထားမလား။ ပြည်နယ်လေး တစ်ခုအဖြစ် လျှော့ချမလား။ အဓိကကတော့ ကာယကံရှင် ဗမာအမျိုးသားများရဲ့ စနစ်အရပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်" ဟု ကချင်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာတူးဂျာက ပြောကြားသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဆော့လိပ် စီတီး မြို့မှ တိရိစ္ဆာန...
အာဆီယံ ယူ-၁၆ ချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအသင်း...
အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရပ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဟု အီဂျစ်စစ်တပ်သ...
ညောင်ဦးတွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အမျိုးသမီးထံမှ လုယက်ခ...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် RSO အဖွဲ့နှင့် မြန်...
ဘန်ကောက် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ပြပွဲသို့ ...
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၏ အရွယ်မရောက်သေးသူများတွင် ဖြစ...
သင့်မျက်နှာပေါ်က အချက်အလက်တွေက သင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အ...